# – Tetezan’i Sambirano. Camion lehibe iray mpitatitra hasy no nivadika teo amin’ny fidirana ny tetezana. Ny alin’ny zoma teo, tany amin’ny sivy ora sy sasany alina, no nitrangan’izany , ary ny sabotsy maraina tamin’ny telo ora maraina vao afaka. Araka ny vaovao azo teny an-toerana dia ny « ballotage » no niavian’ny loza
# -Sambava. Zazalahy 4 taona maty voadonan’ny fiara. Fiara tsy mataho-dalana 4×4 iray no nidona tamin’ny andrin-jiron’ny JIRAMA ny alahady lasa teo. Nisy zazakely vao efa-taona monja koa voafoka niaraka tamin’ilay Poteau tao ka maty tsy tra-drano. Lasa nandositra moa ilay mpamily ary mbola ifampitadiavana hatramin’izao.
#- Antsiranana. Mpianatra teny amin’ny faritry ny Oniversité no voadonan’ny fiara ka tapaka ny tongony. Nitokona noho izany ireo mpianatra namany ka nanambara fa tokony tsy ho azon’ny fiaran’olon-tsotra atao intsony manomboka izao ny mivezivezy eny amin’ny faritry ny Oniversité.
# – Nossy-be. Jiolahy nitsoaka maty tany anaty hantsana. Roa lahy no nentin’ireto zandary hanoro ny namany ka teny an-dalana no niporitsaka nirifatra ity jiolahy iray. Tsy fantatra na noho ny hamaizana fa dia nivarina tany an-kady ilay olon-dratsy ary maty vokatry ny fianjerana.
Nangonin’ i Alem